Majunga | GAZETY_ADALADALA
Posted on 19/04/2009 by gazetyavylavitra
Nidina tany Mahajanga izahay tamin’ny faran’ny herinandro lasa (Paka) teo mba hanangona vaovao momba ny fianakavian’i Kamba, sy hamita ny adidy tsy vita ihany koa fony mbola nahateo am-bohitra ny razana. Nisy ny sary nentina avy any, toy ny sarin’i Kamba (miisa 3) talohan’ny famonosana azy (Nalaina tany amin’ny naman’i Diana Chamia),
ary ireo sary nalaiko manokana tany an-tokantranon’ny reniny, ka ahitantsika an’i Viviane (ilay kambana tamin’i Kamba) sy ny reniny ary ireo mianadahy iray tampo aminy mbola velona, dia i Said sy Berthine. Raha zaza mbola tsy nahay afa-tsy ny mikisakisaka amin’ny tany no nanateranay an’izy telo mianaka teny amin’ny taxi brousse fahiny, dia zazavavy kely pelipelika sy mihazakazaka eran’ny tokotany no ahalalana an’i Viviane ankehitriny. Izy io be kilaoty kely eo anoloan-dreniny io.
Tafiditra tao anatin’ny dia ihany koa ny fijerena izay mbola azo atao hanampiana ny ankohonana kely sisa tavela. Misy efatra mianaka moa izy no mbola miara-miaina ao. Ankoatra ireo dia misy ihany koa ireo mpiray tampo amin-dreniny miray tokotany amin-dry zareo ao.
Betsaka ny resaka nifanaovana tamin’i maman’i Kamba. Tafiditra tanatin’izany ny fitantarany ny andro farany nahitany an-janany tsy nahatsiaro tena intsony sy ny fitondrana azy tany amin’ny dokotera. Ny fanafody voavidy, nefa ny aina nafoy.
Tsy zakany hatramin’izao ny fahalasanan’I Kamba kely, noho izany dia ireo kilalao sy zavatra rehetra nampiasaina tamin’ny fikarakarana azy fahavelony, tapitra nomeny sy nozarainy taman’olona avokoa. Saingy tsy misy navoakany ny trano kosa ny sarin-janany rehetra.
Ireny no tsy foiko ka notazoniko
Mivarotra arina (charbon de bois) eo anoloan’ny vavahadiny no asa fitadiavana vola anampiany ny sasa lamba izay efa fanaony taloha sy mbola nampiana koa tato aoriana.
Noho i Viviane mbola kely sy tsy mahaleo tena tsara dia sakanan’ny zokibeny tsy hiasa ivelan’ny trano, hono, izy. Nefa i Said dia andoavana saram-pianarana 60.000 FMG isam-bolana, raha any amin’ny sekolim-panjakana kosa i Berthine. Ary dia io zokibeny tsy mamela azy hiasa any ivelany io no mifanampy aminy amin’ny fandoavana izay saram-pianarana izay. Rehefa noresena lahatra moa i maman’i Kamba ny amin’ny hoe tsy voatery ho eo foana i Zokibenao nefa ny fiainana tsy maintsy hitohy, dia nanaiky nanao iretsy sasa lamba voalaza ery ambony
Nahatsapa ho irery sy sahirana mafy tokoa aho tamin’ireny krizy ireny, satria ny zaza tsy maintsy entina any amin’ny hopitaly rehefa marary, nefa ny bombe lacrymogene tsy zakan’ny ankizy rehetra. Ny lehibe aza taty tsy nahatanty. Izaho rahateo sady manangy no lehilahy, i kamba etsy andaniny marary any amin’ny hopitaly, i Viviane ao ambavahadin’ny hopitaly tsy maintsy omena nono satria tsy azo nampidirina tany amin’ny hopitaly ny zazakely.
Marihana ho an’izay tsy mahalala fa nilaozam-bady ny renin’i Kamba. Izy daholo noho izany no mihevitra izay hamelomana azy efatra mianadahy teo an-tanany, na eo aza ny fanampiany mpiray tampo.
Na teo aza anefa ny elanelan-tany dia tsy nitsahatra izahay avy aty Antananarivo nandefa izay azo natao rehetra ho fanohanana ny fianakaviana tany Mahajanga. Ho fanamaivanana ny vidim-panafody. Nisy koa taminareo namana no nitondra izay voatsirambin’ny tanana
Ho antsika rehetra nanao izay tratra sy nahatsiaro azy, ho anareo rehetra izay nandefa fanampiana ho azy, dia hoy i maman’i Kamba nampitondra hafatra anay nandalo tany hoe:
Misaotra betsaka, ho tahian-janahary, fa tena nanana raiamandreny tokoa izahay, nanana mpiray tampo, ary na teo aza ny elanelan-tany dia tsy namela anay ho irery ianareo fa rehefa tafavoaka ny HJRA ny tsaikinay iny, dia mbola nanohy hatraty Mahajanga ianareo. Tsy nitsitsianareo vola aman-karena i Kamba. Nahavita be ianareo tamin’ny fanohanana ara-bola, nisy nitondra fanafody sy Farilac, sns…. Tsy voavalinay ireny, fa hitanareo ihany ny fianakavianay fa tena fianakaviana sahirana tanteraka. Andriamanitra hamaly ny soa vitanareo.
Tsaroany manokana tamin’ireo teny ireo ny Armée du Salut (izay fantany bebe kokoa amin’ny alalan’i Mino, Avylavitra, Mavo), ny Serasera ary ny maman’i Lova Rakotomalala izay tonga vatana nijery azy ireo tany Mahajanga nisolo tena ireo malala-tànana tsy nitonona anarana, ka isan’izany ireo fianakaviana Italiana mazoto amin’ny fanaovana asa soa ho fanampianana ny fianakaviana Malagasy sahirana, sy nanaovany fanamarihana manokana hoe:
veloma sy misaotra any amin’ilay olona tsy nahay teny gasy iny, fa ny saoferan’ny taxi no nanjary mpandika teninay taty Mahajanga
Fa izay tena zavatra tsy nampoizinay mivady tamin’ny zavatra nitranga tany an-toerana dia ny filazan’i Maman’i Kamba ny fisian’ny olona nanararaotra ireny fitsaboana ny zaza ireny mba hanangonan-karena sy hieboeboana eran’ny tananan’i Mahajanga. Misy ny anaran’olona voatonontonona amin’izany. Tsy iray monja an ! Fa ilay olona monina any an-toerana no tena fanta-poko fanta-pirenena satria ny vadiny ihany,hono, no mitantara eran’ny tanana ny fandehan’ny afera maloto.
Toy izao no fitrangany, araka ny fitantaran’i Maman’i Kamba azy.
Nifankahita tamin’i Diana Chamia ry zareo ary dia fantatsika ny tohiny.
Tonga tany Antananarivo, dia zara raha nahazo lamba iray sakaosy (fripperie) izahay,
hoy i maman’I Kamba,
ary raha mba niteny tamin’io olona nanodina ny vola io aho, dia nambaran’ity farany fa efa manana ny làlany ny vola fa ireny aloha no anjaranareo. Dia nividianana zavatra madinidinika teny indray avy eo….Nefa,
hoy hatrany i maman’i Kamba,
dia hitako izao ny valopy feno vola vahiny, vola miloko manga izany ilay izy, ary tsy vola gasy an, haiko lokon’ny vola gasy jiaby io…
Indray mandeha io olona io no voalazany fa mba nitsidika azy teny amin’ny hopitaly fony taty Antananarivo…
Nony tonga tany Mahajanga dia nisy fotoana nilaza ilay olona fa hanatitra vola hividianana fanafody. Tonga tokoa izy nanatitra, toa 150.000FMG angaha. Dia izay koa no nanitsahany farany ny tokonam-baravaran-dry Kamba kely mandrapahafatin’ny zaza araka ny filazan’i maman’i Kamba hatrany.
Izao anefa no vaovao farany voaangonay mivady tany: nalahelo mafy i maman’i Kamba saingy tsy nisy azony natao aloha nandritra ireny fahoriana nidona taminy ireny. Normal angamba hoy ianao? Eny tokoa, saingy ny tohiny no hahitanao izay tena vao mainka nandetika lalina kokoa ny fantsin’ny fijaliana. Tongan’ny olona tany am-poto-tsofiny fa hoe
ny volan-janany dia nahavitan’ilay olona trano misy efitra telo.
Ary tsy iza,hono, no nivoahan’ny feo fa ny vadin’ilay olona ihany.
Tsy nisy fotoana nanamarinana ny momba an’io intsony aho na dia naniry mafy ny handeha hijery ilay trano sy izay monina ao aza, noho ny tsy nilazan’i maman’i Kamba ny fisian’izay olana lehibe izay raha tsy efa hariva be talohan’ny andro hiverenanay hody aty Antananarivo. Nampanantena anefa izy fa hisy fotoana hanomezany vaovao lehibe ho antsika mikasika an’io trangan-javatra mampalahelo azy io.
Misy moa ny olona no tsy mahalala an’i Kamba sy ny tantarany
hoy i maman’I Kamba (satria toa maromaro ihany no niteraka kambana ry zareo ao Mahajanga), ka dia manontany an’ilay vadin’ity nanodina ny vola hoe
Kamba iza moa izany?
Ka novalian’ity olona hoe
Ilay tsaiky nentina tany Antananarivo nodidiana iry e
Taty aoriana ny olona vao nisy tonga saina, rehefa naheno fa maty ny zaza hoe,
hay ve iny ilay kamba nolazain’ilay olona fa nahazoany vola nanaovana trano e.
Ary dia nolazainy tamin’i maman’i Kamba ny tantara.
Olona tsy fantatro velively, tsy mbola nanan-draharaha tamiko ary tsy mbola hary niresaka tamiko no nahalalako an’izany. Ary dia niezaka nanontany ny olona aho, ka ao Tsararano ao no misy ilay trano natsangana tamin’ny vidin’ny ain-janako
Tena asa re rey olona izay fomba hatoriana ao anatin’izany trano izany, fa tsy hampanonofy ratsy ve izany, raha ‘ndeha hataontsika hoe tsy hanangatra ny zazakely?
Izahay mivady moa dia velom-panontaniana mihitsy hoe fa angaha tsy niteraka izy mivady izany, dia valiny azonay ny hoe efa nahalehibe zaza tokoa ry zareo, ary toa misy mianatra aty Antananarivo aty aza.
Miala tsiny fa sarobabay izy ity ka izay voa aza tezitra, zavatra natao koa moa ka samia mizaka ny vavan’ny olona araka izay nataony e!
Tsy zakako notehirizina mantsy ka tsy maintsy navoakako eto sao hankarary an-doha ahy.
Filazan’ny renin’ny zaza ireo, ary tateriko aminareo etoana araka izay resany. Ninia tsy namoaka anarana mihitsy ny mpanoratra na dia nisy tokoa aza ny fanononany anarana nandritry ny resaka nifanaovana taminy.
Samia ho tahian’Andriamanitra daholo isika rehetra.
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany | Tagged: Armée du salut, Foko, Kamba, Mahajanga, Majunga, serasera |	Leave a comment »
Mitomany an’i Kamba kely ny foko
Posted on 19/03/2009 by gazetyavylavitra
Maro tamintsika no hahatadidy ny tantaran’i Kamba (na i Antefindrazana Tombotsara, amin’ny tena anarany, teraka tamin’ny 07 jona 2007 tao Mahabibo, Mahajanga). Ilay zazalahy kely nentina niakatra an’Iarivo mba hatao fandidiana tao amin’ny HJRA noho ny olana hatrany am-bohoka nahazo azy.Naseho an-gazety tao amin’ny Midi Flash tamin’ny volana jona na jolay 2008 tany ho any -volana nanaovana fandidiana azy indrindra – i Kamba tamin’izany fotoan’andro izany.
Niezaka isika olombelona ny hanamboatra sy hitsabo araka izay takatry ny saina, saingy Andriamanitra no mandahatra, ka naka an’i Kamba kely androany maraina.
Mbola hisy ny fotoana hanaovako tamberina fohy momba azy eto rehefa afaka ny alahelo sy ny ngidiny.
Maty tokoa i Kamba, tsy hitako izay teny hahalaza ny alahelo, fa toa sary vongana mandehandeha aho misaina izay rehetra nolalovana hatreto tamin’ny fikarakarana sy fanohanana azy sy ny ankohonany.
Androany maraina tokoa mantsy, raha niantso ny iray amin’ireo mpiara-mifarimbona amiko amin’ny fikarakarana sy fanohanana an’i Kamba ny reniny, dia niangavy fanohanana momba ny ho enti-manana ny hampidirana azy any amin’ny hopitalin’Androva – tratry ny fahatoranana i Kamba kely tamin’io fotoana io, ary efa an-dàlana ho any amin’ny hopitaly ry zareo – dia nandefasana crédit tamin’ny alalan’ny E-Recharge aloha ny reniny, no sady nafàrana fa raha vantany vao tonga manoloana mpitsabo dia miantsoa haingana aty Antananarivo mba hifampitàna vaovao momba ny tena fototr’aretina. Lasa iny crédit phone iny, dia niandry ny renin’i Kamba mba hiantso aho, saingy rehefa tsy nahandry intsony dia izaho no niantso mivantana azy. Navelany hipetraka tsara ny fanontaniako raha voarainy na tsia ny sandan’ny fahana nalefako, avy eo dia sady namaly ny faharaisana izy no nigogogogo nitomany nilaza fa
‘Lasa, tonton, Kamba kelintsika e! Lasa Kamba! Maty ny zanako! Tsy arakaraky ny nitondrana azy tan-Tananarivo tany fa maty Kamba‘.
Tankina aho, nipararetra sy nalemy ny lohaliko ary na ny zavatra rehetra nataoko aza dia tsy nanànako antoka daholo.
Nitomany tanaty aho, satria mbola tany amin’ny birao. Tsy haiko nofefena kosa izany nony tany an-katakonana tany. Naka bàhana aho, ary rehefa nahazo hery kely dia nanapariaka ny hafatra ho anareo namana rehetra – ialako tsiny izay tsy naharay mailaka avy amiko noho ny fo feno tafahoatra –
Ny tao an-tsaiko voalohany dia ny niteny tamin’ny Lehibeko hamela ahy haka andro tsy iasana hahafahako mandevina an’i Kamba kely (Isaorako azy fa tsy nandà izy). Saingy rehefa niantso sy nifampiresaka matetika tamin’ny fianakavian’i Kamba aho, dia tsy ho tratranay telo mianadahy avy aty Antananarivo ny hitondràna ny razana hiala an’i Mahajanga, satria any ambanivohitra lavitra an’i Mahajanga no hitondrana azy,ka tsy maintsy miala aloha araka izay tratra ny fianakaviana, na dia mbola amin’y Sabotsy aza vao hasitrika i Kamba.
Ho anareo rehetra nahalala azy, ho anareo rehetra nahare fotsiny koa aza angamba, ary ho anareo vao nahita ny aminy amin’ny alalan’ity hafatra ity, dia fantaro fa TSY MATY AO AM-PO I KAMBA, mivavaha ho an’ilay anabavy kely kambana aminy, navelany ho irery eo anivon’ny fianakaviany, mivavaha ho an’ny reniny izay niezaka hatrany hitady ny soa sy ny tsara ho azy tamin’izay fotoana kely nandalovany teo anivontsika, sy niaretany izay rehetra azon’ny nofo keliny nozakaina tety ambanin’ny masoandro
Tsarovy ny fiaraha-mientana nentin’i Kamba teo amintsika rehetra, tazony izany ho fahatsiarovana azy sy ho fanohizana ny asa amin’ireo Kamba kely hafa mila izany, sy mbola hila izany
Maty izy, tsy nahavita nisaotra anareo rehetra tonga nijery, nitrotro sy nanafosafo azy fony fahavelony, maty tsy azontsika natrehina tamin’ny fotoana farany sy ny minitra fara-fananana azy koa, nefa koa VELONA SATRIA MBOLA EO ISIKA REHETRA NIARAKA TAMINY SY NANOHANA AZY
Niniako tsy nasiana sariny mihitsy ao anatin’ity hafatra ity, ho fanajana ny zaza sy ny fianakaviany.
Filed under: fahantràna, fahasalamana, fiaraha-monina, kolontsaina, reny sy zaza, tapatapany | Tagged: HJRA, Kamba, Mahajanga, Majunga |	20 Comments »